Volana oktobra : tonga ilay fotoana nomen-dry Lôlô… | NewsMada
Volana oktobra : tonga ilay fotoana nomen-dry Lôlô…
Nandrotsy olona maro ny sanganasany. Manome fotoana fotsiny ry Lôlô dia tonga maro hatrany ireo mpankafy. Ato ho ato indray ny fotoana manaraka…
«…Fofon’ando lasa tiako, rehefa volana oktobra… ». Andinin-kira nalaina tamin’ny « Zakaranda », hiran-dry Lôlô izay sokajin’ny mpankafy ho hira tsara tefy sy rindra indrindra io. Volana oktobra, fotoana efa nomen’i Lôlô ny mpankafy azy eto an-tanindrazana io, volana maromaro lasa izay. Fantatra izao fa hisy ny seho maromaro homanin-dry Lôlô sy ny ekipany, mandritra ny fotoana handalovany eto.
Eto Antananarivo ny fanombohana izany, amin’ny alalan’ny seho roa misesy, ny zoma 14 oktobra, manomboka amin’ny 7 ora hariva, sy ny asabotsy 15 oktobra, amin’ny 3 ora tolakandro. Samy ao amin’ny CCEsca avokoa ireo. Niniana natao indroa, mba hitsinjovana ny fahafahan’ireo mpankafy, efa niandry ny fotoana nomena izany.
Aorian’ny eto Antananarivo, hitodi-doha any Toamasina ry Lôlô. Ao amin’ny Espace La Famille Salazamay ny seho, ny 20 oktobra. Anjaran’Antsirabe kosa ny aorian’izay, ao amin’ny Impérial Hôtel ny asabotsy 22 oktobra ary ao amin’ny kianjan’ny sekoly Saint Joseph kosa ny alahady 23 oktobra.
I Lôlô sy i Farah no ho avy eto. Hanampy azy ireo ry Benny, Bebey, Sammy, Bim ary Sefo Nonoh. Efa niray sehatra rahateo izy ireo nandritra ny seho talohan’ izao. Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny Label.village, ezahina hamaly ny hetahetan’ny mpankafy ireo seho roa etsy amin’ny CCEsca, sy ireo any amin’ny faritra. Hanakoako indray ireo hira tsy lefin’ny taona maro mifandimby, amin’ireo fotoana ireo. Na izany aza, hisy koa ireo hira izay na tsy vaovao aza, tsy mbola faheno firy an-tsehatra.